လူတိုင်း လျှပ်စစ်မီး ဖူလုံရေးသည် ပြည်သူဗဟိုပြု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစ | ဧရာဝတီ
လူတိုင်း လျှပ်စစ်မီး ဖူလုံရေးသည် ပြည်သူဗဟိုပြု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစ
ဧရာဝတီ| May 23, 2012 | Hits:6,756
3 | | လျှပ်စစ်မီး ၂၄ နာရီ ရရှိရေး ဆန္ဒပြမှုများ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး အပါအဝင် မြို့ကြီးများတွင် ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်နေချိန်၌ အစိုးရ သတင်းစာများတွင် အမှတ် ၂ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက မီးလုံလောက်စွာ မပေးနိုင်တော့ကြောင်း ပြည်သူလူထုထံ မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားလိုက်သည်။
လျှပ်စစ်မီး လုံလောက်စွာ မပေးနိုင်ခြင်းသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ နာတာရှည်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယခုလည်း နိုင်ငံပိုင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ တချို့နှင့် ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံးဝဖြတ်တောက်ထားပြီး လူနေ ရပ်ကွက်များကို တနေ့ ၆ နာရီ အလှည့်ကျ မီးပေးရန်သာ ဖြစ်လာခဲ့ပြန်သည်။
နွေရာသီကာလ ဖြစ်၍ ဆည်ရေများ နည်းပါးနေသည့် အတွက် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏလျော့ကျနေခြင်းကြောင့် ပြည်သူ လူထုထုထံ အုပ်စုခွဲ၍ အလှည့်ကျ လျှပ်စစ်မီး ခွဲဝေပေးနေရကြောင်း၊ ထို့အတူ ရွှေလီ-မန်စီ ကေဗီ ဓာတ်အားလိုင်း၏ တာဝါတိုင် ၄ ခု အား မိုင်းခွဲခံလိုက်ရသဖြင့် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏ လျော့ကျသွားကြောင်း လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဌာနက ဆိုထားသော်လည်း အသေးစိတ်လေ့လာ၍ ယခင် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အဖြေတမျိုးရလာမည် ဖြစ်သည်။
တနိုင်ငံလုံး၌ သုံးစွဲနေသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အများစုသည် ရေအားမှ ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း နှစ်ပတ်လည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု တည်ငြိမ်စေရန် ထိန်းထားနိုင်ရေး မစီမံနိုင်ကြောင်း ဦးစွာတွေ့ရသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ် စက်ရုံများမှာ ရေများသော မိုးတွင်းတွင်သာ လိုအပ်ချက်ပြည့်မီရန် ထုတ်နိုင်သည်ဟုဆိုသောကြောင့် ရေနည်းသောကာလ နွေရာသီအတွက် ဆည်ထဲတွင် ရေကို တွက်ချက်ကာ သိုလှောင် မထားနိုင်၍လော၊ သို့တည်းမဟုတ် နည်းပညာနှင့် စက်ပစ္စည်း အရည်အသွေးမမီ၍လော။
ဆန္ဒပြသူများ ထောက်ပြပြောဆိုကြသလို မြန်မာ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိမှု စီမံကိန်းများသည် နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်တင်းရန် မရည်ရွယ်ဘဲ တိုင်းတပါးသို့ ရောင်းရန်အတွက်သာ ဖြစ်နေခြင်းသည်လည်း အကြောင်းတရပ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခု ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာပါ ဆောင်းပါးမှ ကိန်းဂဏန်းများ အရမူ လက်ရှိဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ၃၂ ရုံမှ မဂ္ဂါဝပ် ၃ ထောင်ကျော် ထုတ်နေနိုင်ကြောင်း သိရသဖြင့် လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု အများဆုံး ပမာဏမှာ ၁၈၅၀ မဂ္ဂါဝပ်သာရှိသောကြောင့် ကျန်ပိုနေသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများကို ရောင်းထုတ်နေကြောင်း အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းက ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်သည်။
မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ ဆောင်းပါး၏ အဆိုအရ ဆောက်လုပ်ဆဲ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ၆၁ ရုံရှိပြီး မဂ္ဂါဝပ် ၄ သောင်းကျော် ထုတ်ရန်ပင် စီမံကိန်းချ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဆိုထားသော်လည်း အမှတ် (၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန် ချက်တွင်မူ ယင်းကိန်းဂဏန်းများ မတွေ့ရတော့ပေ။ အဆိုပါစီမံကိန်းများ ဆက်လက်တည်ဆောက်ဆဲလား၊ မည်သည့် အချိန်တွင် ပြီးမည်နည်း၊ ပေါ်ထွက်လာမည့် အကျိုးရလဒ်က နိုင်ငံ့လိုအပ်ချက် ဖြည့်ရန်လား၊ သို့တည်းမဟုတ် ယခင်အတိုင်း ရောင်းစားရန် သက်သက်မျှလား ဆိုသည့်မေးခွန်းများ မေးစရာ ရှိနေသည်။
ယခု နိုင်ငံကို ဖြတ်ပြီး ဆောက်လုပ်နေသော ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းသည်လည်း နိုင်ငံ့စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်အတွက် ဖြည့်ဆည်းရန် မဟုတ်ပေ။
နိုင်ငံပိုင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကပိုင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံးဝ ဖြတ်တောက် လိုက်ရသည်မှာ နိုင်ငံ့ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကြီးစွာသော အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရသည်သာမက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ရုတ်သိမ်း၍ စိတ်ဝင်စားနေသော ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလည်း နောက်တွန့် သွားစေမည်မှာ အမှန်ပင်။
ယခုမှ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ တရုတ်နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများနှင့် ရန်ကုန်မြို့ အနီးတွင် စွန့်ပစ်အပူသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ မဂ္ဂါဝပ် ၆၀၀ ထုတ်မည့် ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင် ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ နှင့် မဂ္ဂါဝပ် ၅၀၀ ထုတ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စွမ်းအင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စက်ရုံများ တည်ဆောက်ရန် အပူတပြင်း စီမံနေသည်မှာ ကောင်းမွန် သော်လည်း နောက်ကျလွန်းနေပြီး ဖုတ်ပူမီးတိုက် ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင် လွန်းလှသည်။
မည်သို့ဆိုစေ၊ မြန်မာပြည် တနံတလျား လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်စွာ ရရှိရန် ရည်ရွယ်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကြီးအကျယ် မထိခိုက်စေဘဲ ရေရှည်အလုပ်ဖြစ်မည့် မူဝါဒ၊ ဗျူဟာ၊ စီမံကိန်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု အရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီဆိုသည်ကို ယခု ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုများက မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။
ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးကိစ္စရပ်များ အပါအဝင် နိုင်ငံသားများ၏ နေ့စဉ်ဘဝ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို လှည့်မကြည့် ခဲ့သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ဆိုး၏ အမွေကို ချန်ထားရစ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံသားတို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ သက်သာချောင်ချိရေး ရှေးရှု ဆောင်ရွက် မှသာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ လမ်းညွန်ချက်ဖြစ်သည့် “ပြည်သူလူထု ဗဟိုပြု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး” ဆိုသည်မှာ အမှန်တကယ် အဓိပ္ပာယ် ရှိလာလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးအလေ့အထ ကာကွယ်ကြ
ခွင့်တူညီမျှ ဝါဒဖြူစင်တဲ့ မြေဆီသို့
16 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Where is bloody Zaw Min ? May 23, 2012 - 8:03 pm	Aye ..Min ….Yay Tar ….toe tet lar p.
write more. use more strong terms.
Editorials are important parts of every media.
good writing. good .
criticize more about this issue among some other topical topics.
This our Myanmar is very ‘ disgusting and distressing ‘ . Been for long time. Long long long long long time. country is full of liars and liars and abusers and corrupts.
no quality people.
so it is very vital to get ‘ good quality ‘ editorials ….at least.
Reply	Kaung Htat Aung May 23, 2012 - 8:31 pm	မြစ်ဆုံအတွက် တရုပ်ကြီးက ရှစ်လုံးကြီးကို ဒေါ်လာသန်း200။ဇော်မင်း ကို သန်း 50 ၊ အေရှားဝေါလ် ကို သန်း 50 ပေးပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ယခု အစိုးသစ်မှာ ပြည်သူတွေရဲ.
ပေးထားရတဲ့ဒေါ်လာတွေပြန်တောင်းနေပြီ။အေရှားဝါးကတော့ပြန်ပေးတယ်ကြားရပေမဲ့ ကျန်နှစ်ယောက်ကတော့ပြန်ပေးဘို့ မဖြစ်နှိင်တော့လို့ အခုလိုမိုင်းခွဲ မီးဖြတ်ပြီးပြည်သူကိုလှည့်စားနေပြီ။
Reply	မျိုးကျော် May 23, 2012 - 10:12 pm	စီမန်ခန်.ခွဲမှုက ကိုယ့်ကျိုးအတွက် စီမန်ထားတာများ
တယ် ကိုယ့်နိုင်ငံလိုအပ်တာဘယ်လောက် လုံလောက်ပြီဆိုရင် ရောင်းလို.ရတယ် ခုချိန်မှာ မိုးတွင်းရောက်သော်လဲဘဲ မီဂါဝပ်ကို မူလအတိုင်းပြည့်မှီအောင်တော့တရုပ်ကထုတ်မပေးနိုင်တော့ဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြစ်စုံလုပ်ခွင့်
Reply	မင်းညီ May 23, 2012 - 10:14 pm	အလကားအကြောင်းပြချက် မိုင်းခွဲလို့ဆိုရင် ငါတို့ မြစ်ကြီးနားမှာ ဟိုအရင်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့အချိန်ကထဲကကို မီးမရတာ တတောင်းစားကြီးတွေရဲ့…… ဟိုသေချင်းဆိုးဇော်မင်းရေ မင်းတစ်ယောက်အတွက်သာ လျှပ်စစ်ပိုတာ ပြည်သူအတွက်ကလိုတယ်ဟ ငတုံးရ….. စွတ်ရောင်းမစားနဲ့ …… မင်းပိုတယ်ထင်ရင်လဲ ကိုယ်ဟာကို လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံလုပ်ပြီးထိုင် ……. မင်းကိုယ်ထဲကို လွှတ်ထဲ့လိုက်။
Reply	shanmintar May 24, 2012 - 5:11 am	Myanmar need
Aladdin lighting .
Reply	Ye Myin May 24, 2012 - 9:37 am	Hey,Myanmar Why you sold out the plenty of gas to other country ? This is not renewable energy.Since 1994,Thailand have no electricity shortage but they don’t sold out their own gas and they don’t use the large volume of their own gas. Myanmar must lesson learn from Thailand and think many way production of power by Geo-thermal,Wind power,Tidal wave power,Gas turbine,Charcoal ,Waste use turbine,Solar power and hydro power etc…etc .
Reply	အင်ဗာတာတစ္စေ May 24, 2012 - 11:31 am	ကျွန်တော်သည် ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာ မြို့နယ်(၇) ရပ်ကွက်ထဲတွင်နေပါသည်။ ကျွန်တော့်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော့်ကို တီဗီဖွင့်ဖို့၊ ရေဒီယိုဖွင့်ဖို့၊မီးထွန်းဖို့သုံးပါသည်။ တနေ့သောအခါ အမည်မသိလိုင်းမင်းဆိုသူမှ ဘေးအိမ်အတွက် မီးလိုင်းလာချိန်းရာ ကျွန်ုပ်တို့အိမ်မှ အအေးကြိုးတချောင်း မတော်တဆပြုတ်သွားပြီးထိုသူမှအမှတ်တမဲ့ ကောက်ပြီးပြန်ချိတ်လိုက်ရာ အခြားအပူကြိုးသို့မှားချိတ်မိသဖြင့် ကျွန်ုပ်မှာလည်း ဘ၀တပါးသို့ပြောင်းသွားရပါသည်။ နောက်ဘ၀မှ သိရသည်မှာပိုင်ရှင်မှ မိမိငွေဖြင့် အင်ဗာတာအသစ် တလုံးထပ်ဝယ်လိုက်ရကြောင်း သိရပါသည်။
Reply	ကိုသူရ May 25, 2012 - 9:02 am	နောင် အနာဂတ်မှာ ပုံမှတ်မီးရဖို့လိုအပ်ပါတယ် အခုချိန်မှာ ဓာတ်အား မလောက်ငှရင် နောင်ကို လောက်ငှအောင်လုပ်ပေးပါ
Reply	ကိုသူရ May 25, 2012 - 9:06 am	မိုင်းခွဲသော အကြမ်းဖက်သမားများ အားလုံးကို အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်တယ်။ နိုင်ငံတကာ ကလည်း လက်မခံဘူး ဒီလိုသာ အဖျက်လုပ်ငန်းတွေ ဆက်လုပ်နေရင် ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး ရန်သူဖြစ်မှာပဲ။ အများပြည်သူ စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်ရင် တူသော အကျိုးပေးမှာပဲ
Reply	ပကတိအမြင် May 25, 2012 - 9:12 am	အားလုံးမီးပျက်တာကို ကိုချင်းစာပါတယ် တမျိုးမြင်ကြပါနဲ့ လျှပ်စစ်ဌာနဘက်မ လိုက်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး ဌာနအနေနဲ့ တဖက်ဌာနက ဓာတ်အား ရရင်ရသလို ဖြန့်ဖြူးပေးချင်တာဖြစ်မှာပါ အခုအခြေအနေ ကလည်း ရသလောက်ပြန်ဖြန့်နေတာဘဲဖြစ်တယ် များများဖြန့်ရင် ဌာန၀င်ငွေများများ ရမှာဖြစ်တယ် မတက်သာလို့သာ မီးကို အချိန်ပိုင်း ဖျက်ရတာဖြစ်မှာပါ
Reply	ပြာ May 25, 2012 - 10:20 pm	ဘာတွေမတတ်သာနေတာလဲ ဆိုတာ အမှန်ကိုရှင်းပြနိုင်ပါ့မလား
Reply	Ye Myin May 26, 2012 - 9:10 am	Plan..Plan….Proper plan.. must do by government. PLS work hard PLS try to solve problem. You stay better life than country people in Nay Pyi Daw.(Full Electricity and full facility)
Reply	titi May 26, 2012 - 10:37 pm	Very sorry , KIA give electric to MyitKyina, kachin state for 24 hours since 2003. Booming is Myanmar army because they are big . got it.
Reply	Duwa May 26, 2012 - 10:40 pm	ကိုသူရ ရေ.. အစိုးရက လျှောက်ဖွတိုင်းလိုက်မဟောင်ပါနဲ့ KIA ကမိုင်းခွဲတယ်လို့ပြောရအောင် ဘယ်မှာလဲသက်သေ… မိုင်းလဲ မခွဲပါဘူး… အစိုးရ က ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကတည်းက မီးအလှည့်ကျပေးမယ် ကြေညာထားပြီးသား.. KIA မိုင်းခွဲတယ်ဆိုတာက အခုမှ.. မိုင်းခွဲမှာကြိုသိတာလား.. ဒါမှမဟုတ် အဲလိုပြောဖို့ အကွက်ဖန်တာလား… စဉ်းစားပေါ့…
Reply	စိုင်းလေး May 29, 2012 - 12:47 pm	ပြည်သူတွေ၇ဲ့တောင်းဆိုသံတွေ ဝေဖန်သံတွေက
တော့ တတိုင်းပြည်လုံး ဆူဆူညံ တကမ္ဘာလုံးတောင်
လျှံနေပြီ ဒင်းတို့ကတော့ (ချင်းအမျိုးသားတဦး
ပြောသလိုပြော၇၇င် နွားနားမှာ ၈ီတာ တီး၇သလို
ဘဲ) ကျွဲပါးစောင်းတီး မြန်မာစကားပုံကို သူပြောတာ
ဟုတ်ပါတယ် ဒင်းတို့တတွေကတော့ အ၇ှက်မ၇ှိကြ
ဘူးသွားမြဲ၊ စားမြဲ၊ပြည်သူတွေကို ဖိနှိပ်မြဲဘဲ။
Reply	ဦးပို June 8, 2012 - 3:01 pm	ဖုရောင်းတိုင်ရေးအားစိုက်နေခိုက်ချွတ်ချော် မှုများရှိနေတဲ့လျှပ်စစ်
ယနေ့အချိန်အခါတွင် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအဖြစ် ဒီမိုကရေစီကို ဖော်ဆောင်နေပြီဖြစ်သော်လည်း အစိုးရရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်တွင် အမူအကျင့်ဟောင်:များ မပြောင်းလဲသေးသည့် အစိုးရရုံးများစွာ ရှိနေပါသေးသည်ကို ကြားသိရပါသည်။ သမတ္တကြီးမှ အထက်ရုံး အောက်ရုံး သမတ္တရုံး ဟူ၍မရှိ အစိုးရဝန်ထမ်းများသည် ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းများသာ ဖြစ်သည်ဟု များမကြာမီကာလအတွင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သော်လည်း တကယ့်လက်ေ တွ့ တွင်မူ အထက်ရုံးအောက်ရုံး ဟူ၍ ခွဲခြားခံရခြင်းများ ရှိနေပါသေးသည်။ အမူအကျင့်ဆိုသည်မှာ ပြောင်းလဲရ
အတော်ခက်လှပါသည်။ လူတွေ ပြောင်းသွားသော်လည်း မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အမူအကျင့်ဆိုးများ ကျန်နေပါသေးသည်။ ယခု ဖော်ပြမည့် အကြောင်းအရာမှာ များမကြာမီကာလတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လူငယ်အချင်းချင်း ဒေါသအလျောက် အချင်းများကြရာမှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ အနည်းငယ်ရရှိသွားသည်ကို အကြောင်းပြု၍ တိုင်တန်းကြရာမှ
မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်သဘောဖြင့် သမတကြီး၏ အမိန့် အား လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်
ရုံးတစ်ရုံးထဲတွင်တောင်မှ ဝန်ကြီးရုံး ဌာနခွဲရုံးဆိုပြီး ခွဲခြားဖိနှိပ်ခဲ့ရာမှ ရရှိရမည့် အပြစ်ဒဏ်ထက် အထက်ရုံးဆို၍ အာဏာကုန်သုံးကာ
အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းများ ရှိနေသေးသည်ကို သမတ္တကြီးအား သိရှိစေလိုပါသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ လျှပ်စစ်(၂)ရုံး၊ ဝန်ကြီးရုံးတွင် အလုပ်လုပ်နေသော မအေးနန္ဒာနှင့် ဌာနခွဲရုံးတွင် အလုပ်လုပ်နေသော မအေးမြ တို့၂ ဦး အချင်းများကြရာမှ ၂ ဦးစလုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ရာ မအေးနန်ဒါတို့မှ မကျေနပ်၍ တိုင်ကြားခဲ့ရာ “အထက်ရုံး အောက်ရုံးဟူ၍ မရှိ” ဆိုသည့် သမတ္တကြီး၏ မူဝါဒအတိုင်း လျပ်စစ်(၂)ရှိ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းလူကြီးများမှ ” ဘက်မလိုက် မညှာတာ မငဲ့ကွက် ” “သူ့ လူ ကိုယ့်လူ” ဟူ၍ မခွဲခြား “ဝန်ကြီးရုံး ဌာနခွဲရုံး”ဟူ၍ မခွဲခြားပဲ အချင်းများ ခိုက်ရန်ဖြစ်ခဲ့ချင်း အတူတူ မအေးမြ အား အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်လိုက်ကြသည်။ ပြသနာ တစ်ရပ်ကို စဉ်းစားချင့်ချိန် ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း ရှိဖို့ အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်း လူကြီးများအနေဖြင့် မည့်သည့်ပြသနာကိုမဆို စေ့စပ် ပိုင်နိုင်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း ရှိဖို့အများကြီးလိုနေပါသေးသည်။ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှ မအေးမြဦး တစ်ဦးတည်းအား အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းသည် မတရားသဖြင့် ထုတ်ပယ်မှုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းလကြီးများ အနေနဲ့မိဘအုပ်ထိန်းမှုနှင့် ဝေးကွာနေသော လူလွတ် ဝန်ထမ်းများအား မိဘနှင့်မခြား အမှားကို အမှန်ဖြစ်လာအောင် ဆုံးမ သွန်သင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလက်အောက်ရှိ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းများအပေါ်တွင် မိမိ၏ သားသမီးများ နှင့်မခြား
မိသားစု စိတ်ဓာတ်ထားကာစောင့်ရှောကကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တရားမျှတမှုကို အလေးမထား လူစွဲထား၍ အာဏာကုန်သုံးခြင်းမျိုးများ မပြုလုပ်ကြဖို့အေ ရးကြီးပါတယ်။ သမတ္တကြီးမှလည်း ယခုလို မတရားမှုမျိုးမဖြစ်ပွားစေရန် ပြသာနာကို စေ့စေ့စပ်စပ် ဘက်လိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးမကျင့်သုံးပဲ
လက်အောက်ဝန်ထမ်းများအပေါ်တရားမျှတငဲ့ညာထောက်ထား စဉ်စားချင့်ချိန်တတ်သော ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းကောင်း လကြီးများ ဖြစ်လာစေရန် လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်သည်များ ချမှတ်ညွန်ကြား ပေးရန် အထူးမေတ္တာ ရပ်ခံပါသည်။
အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင် အမှုမှသည် ကလေးသူငယ်ဘဝ လုံခြုံရေးဆီသို့
အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ကျရှုံးခြင်း
မြန်မာ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သံခင်းတမန်ခင်း အကျပ်အတည်း
တရုတ် – မြန်မာ ဆက်ဆံရေးတွင် မြစ်ဆုံက အရိပ်မိုး မနေသင့်
အစိုးရသစ် ရက် ၁၀၀
သမ္မတ ဦးထင်ကျော် MIA ဖြစ်နေပြီလား
မြစ်ဆုံဆည် ပြန်စခြင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျရှုံးစေလိမ့်မည်
ခရိုနီတွေ ဖျက်ဆီးထားတဲ့ တိုင်းပြည်